Faritra Boeny – Page/Zip : nomena fiofanana hanara-penitra ireo mpiompy tantely | NewsMada
Faritra Boeny – Page/Zip : nomena fiofanana hanara-penitra ireo mpiompy tantely
Par Taratra sur 07/03/2016
Tohanan’ny fiaraha-miasa amin’i Alemaina Page/Zip (Programme d’appui à la gestion environnemental) ny vondron’ny mpiompy tantely any amin’ny faritra Boeny. Fanofanana faharoa nomena azy ireo tao Mahajanga izany, ny 3 marsa lasa teo.
Nomena fiofanana momba ny fanatsarana ny fiompiana sy ny varotra ireo vondron’ny mpiompy tantely any amin’ny faritra Boeny. Roa taona izao ny nisian’izany vondron’ny mpiompy tantely izany, ka tanjona napetraka ny haha matihanina azy ireo amin’io sehatra iray io. Koa ny fiofanana nomena azy ireo, hahazoana vokatra tsara manara-penitra, takin’ny Bureau malgache des normes.
Fenitra eto amin’ny firenena tsy maintsy arahin’ireo mpiompy any amin’ny faritra Boeny, noraisina avy amin’ny tsena iraisam-pirenena, ny hahazoana manondrana ny vokatra any ivelany. Fanamby lehibe nofaritana any Boeny ireo, hahatonga ireo mpiompy ho filamatra eto amin’ny firenena, amin’ny fahaizana manaraka ny lafiny teknika hahatsara ny vokatra. Nampahafantarina azy ireo mihitsy ny famaritana hoe tantely tsara kalitao ; naseho azy ireo koa ireo fitaovana mety hahazoana izany vokatra tsara izany.
Tokony hampalaza ny faritra
Nomena azy ireo, manaraka izany, ny teknika ara-barotra sy ny fifanakalozana fahaiza-manao. Nosoritan’ny talen’ny kabinetra ao amin’ny faritra Boeny, Hemedy, ny tokony hampalaza ny faritra amin’ny fivarotana vokatra tantely tsara kalitao sy manara-penitra. Notsiahivin’ny tale kabinetra tamin’ireo mpiompy ihany fa miankina tanteraka amin’ny fiarovana ny ala ny fahatrarana izany tanjona izany.
Tsy mijanona amin’io faharoa io ihany ny fanofanana, indrindra fa nofaritan’ny faritra ho tanjona amin’ity 2016 ity ny fanatsarana ny fiompiana tantely.